DHAGEYSO Baarlamaanka oo maanta yeelanaya kulan lagu ansaxinayo golaha wasiirada
Xildhibaanada aqalka baarlamaanka dalka ayaa maanta lagu wadaa inay yeeshaan kal fadhi ay ku eegayaan golaha wasiirada ee uu dhawaan soo magacaabay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo todobaadkii la soo dhaafay turxaan bixin lagu sameeyay.
Guddiga baarlamaanka u qaabilsan su’aalo weydiinta sarakiisha loos oo xusho xilalka kala duwan ayaa laga sugaya inuu soo bandhigo warbixin la xariirta turxaan bixintii uu sameeyay.
Kal fadhigan baarlamaanka ee maanta ayaa imaanaya kadib ugu yaraan laba bilood oo ay fasax ku maqnayeen mudanayaasha.
Isbuuci hore waxaa turxaan bixin lagu sameeyay 9 wasiir oo uu soo magacaabay Mr. Kenyatta waxayna kala ahayeen Prof.Margaret Kobia, Peter Munya, John Munyes, Keriako Tobiko, Ukur Yattani, Rashid Achesa Maxamad, Monica Juma, Farida Karoney iyo Simon Chelugui.
Wararka qaar ayaa sheegaya in guddigii turxaan bixinta ku sameeyay uu dhamaantood meel mariyay in kastoo baarlamaanka la horgeynaya si ay magacyadaasi daaqada uga tuuraan ama intii la ansaxiyo madaxweynaha loogu wareejiyo.
Waxaanan turxaan bixin lagu sameynin 6 wasiir oo mar labaad uu madaxweyne Kenyatta soo magacaabay.
Xildhibaanada garabka mucaaradka Nasa ayaanan ka qeyb gelin turxaan bixintii lagu sameynayay golaha wasiirada ee cusub .
Fadhiga uu baarlamaanka yeelanaya galinka dambe ee maanta kaasi oo lagu eegaya golaha wasiirada ee su’aalaha la weydiiyay ayaa waxaa ka horeeya shir mudanayaasha ka tirsan xisbiga talada haya ee jubilee ay ku yeelanayaan madaxtooyada dalka.
Hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka sido kalena ah mudanaha laga soo doortay degaanka Garissa Township Aadan Bare ducale ayaa ka hadlaya waxyaabaha kulankaasi uu ku saabsanyahay
Xita hadii xildhibaanada mucaaradka aysan galabta baarlamaanka iska xaadirinin, waxaa suura gal ah in jubilee ay aqlabiyadooda u adeegsadaan inay ansaxiyaan magacyada la hor keenaya.
Dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka Justin Muturi ayaa la filaya in magacyada sarakiisha loo soo magacaabay safiiro iyo xoghayayaal ku wareejinaya guddiyada kala duwan ee golahaasi sharci dejinta si turxaan bixin loogu sameeyo.
← Madaxweynaha koonfur Afrika oo loo qabtay 48 saacadood oo uu iska casilayo
Turkiga oo Maraykanka ku eedeyay inuu hubeynaya argagixisada →